सुन कसरी बन्यो ? - Media Chok
२०७७ आश्विन १७, शनिबार मा प्रकाशित ४ महिना अघि
३०९ पाठक संख्या
सुनको खपत प्रत्येक देशमा भारी मात्रामा हुने गर्छ । झन् हाम्रो जस्तो धार्मिक संस्कारहरू धेरै भएको देशमा सुनको प्रयोग अत्यधिक हुन्छ । तर कसरी बने र सुन र अन्य धातु यस पृथिवीमा ?
बुधबारदेखि फेरि वर्षा र हिमपातको सम्भावना
आज पनि मौसम बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना